အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အမေရောသမီးကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း ပိုးပန်းမိသောကောင်လေး – Myanmar
September 4, 2020 admin Knowledge, Love 0
Zack အမည်ရှိ လူငယ်လေးတစ်ဦးဟာ နာမည်ကျော် ကြင်ဖက်ရှာဖွေရေး app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Badoo မှာ Chelsey Rochford အမည်ရှိ အမျိုးသမီးကို ပိုးပန်းမိပါတယ် ၊ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ သူဟာ Chelsey Rochford ကို ပိုးပန်းတဲ့ တော်ကီတွေအတိုင်း သူမ ရဲ. မိခင်ကိုလည်း ပိုးပန်းနေမိပါတယ် ။
ဒီချာတိတ်ဟာ ကံဆိုးချင်တော့ ကြင်ဖက်ရှာဖွေရေး app မှာ အမေနဲ့သမီးကို တပြိုင်တည်းလိုလို ရှာဖွေတွေ့ခဲ့ပြီး တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို မက်ဆေ့ချ်တွေ အတူတူပို့ ပိုးပန်းမိလျှက်သား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကို သားအမိနှစ်ယောက်လုံးက သတိထားမိပြီး ၊ ဒီချာတိတ်ကို စနောက်ဖို့ ကစားခဲ့ကြပါတယ်။
Zack ဟာ သမီးဖြစ်သူကို စတင်ပြီး ပိုးပန်းတာ ဖြစ်ပြီး သူဟာ မန်ချက်စတာမြိုကို ပြောင်းလာတာ မကြာသေးကြောင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အိမ်ကို အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ပြိုင်တည်းလိုလိုပဲ Chelsey ရဲ. မိခင်ကိုလည်း အိမ်အလည်လာဖို့ ဖိတ်တဲ့ စာတိုကို ပေးပို့မိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာ Chelsey က သူမအနေနဲ့ Zeck ဆီမလာချင်ကြောင်း ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူမအမေကိုလည်း ဇက်က ဖိတ်ခေါ်ထားတော့ လာရမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ ချာတိတ်လေးဇက်က နှစ်ယောက်လုံးအတွက် နေရာရှိကြောင်း ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် ။